Android egweri biini - Olee otú iji weghachi ehichapụ faịlụ na Android b
Gịnị mere egweri biini maka android?
N'ihi na android ọrụ ndị obodo na-ebi na-eto eto na a obodo maa deletes data na-enweghị ebe ọ maara na mkpa ike inwe na-eme n'ọdịnihu. Iji jide n'aka na ihe kasị mma na ọkaibe functionalities na-agbakwunyere n'ime usoro e nwere ọtụtụ iri puku ngwa na-eme ka n'aka na faịlụ na anọwo na-ehichapụ na-weghachiri eweghachi iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma functionalities enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge . The nkuzi e mepụtara iji jide n'aka na ihe kasị mma nke kasị mma ngwa ọdịnala na-ẹkenam ka onye ọrụ na onye ọrụ na-ọkọkpọhi ọkaibe ọrụ mgbe ọ na-abịa data mweghachi na ka ma e accidently ehichapụ ma ọ bụ n'ihi na ihe ọ bụla ma ọ bụ usoro mmadụ njehie. The ngwa na-kọwara ebe a ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma agbakwunyere Nkuzi nakwa na ga-eme ka n'aka na Filiks na-mfe
Android Data Recovery - Plan A
Ọ bụrụ na e nwere kemgbe a data ọnwụ na android ruru ka ihe ọ bụla ndị ọzọ karịa a mebiri emebi ekwentị ahụ atụmatụ a A e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe atụmatụ. The ngwa ọdịnala na-na-eji ndị dị ka ndị:
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ngwa na e mepụtara na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ mkpa maka akwado ihe data na-tutu amama kpamkpam. The mebere na Ígwé ojii gburugburu na e nyere site a ngwa bụ ndị kasị mma na ha na-eme n'aka na data bụ mgbe niile kwadoo iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ọrụ na nke a. Ngwa e featured na Play Store na mkpokọta fim nwekwara stellar nke na-egosi na ọrụ bụghị nanị nke a n'anya ngwa kamakwa ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe mgbake arụmọrụ enweghị okodu ọbụna otu penny. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ngwa bụ ihe kasị mma n'ihi na akụkụ na ọ pụrụ ga-eji na-anọghị n'ịntanetị nakwa nke pụtara na iji jide n'aka na ihe kasị mma mgbake e mere onye ọrụ na-adịghị ga ijide n'aka na internet a chọrọ .
2. egweri biini maka Android
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na nke Steti nke nkà na ngwa na-e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma faịlụ na ihe osise ndị dị mkpa na ọdịdị na-natara enweghị ihe ọ bụla nke na-ọzọ na-eri. The egweri biini maka android bụkwa n'efu ma jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ọrụ na ọbụna nke a free ngwa na e emelitere mgbe nile iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma mgbake ụdịdị na ọrụ tinyere kenkwukorita interface na bụ akụkụ kasị mma nke niile. The fim nke ngwa dị ukwuu na ike ga-eji na-eme nbudata mkpebi.
Uru nke Plan A
The akụkụ kasị mma bụ na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na free ngwa ebudatara ma nwee mmasị enweghị ihe ọ bụla nke. Ojiji adịghị na-eji ihe ọ bụla iji jide n'aka na mgbake e mere.
Ụkọ ihe ụfọdụ nke Plan A
Nnukwu mwepu nke atụmatụ bụ na ngwa na-erepịaghị ohere na maka otu ihe ahụ ọ na-egbochi usoro na-underway mgbe ọ na-abịa android usoro. Nke abụọ na nke kasị ọdachi mwepu bụ na onye ọrụ nwere ike ghara inwe 100% ekwe nkwa na data ga-eweghachi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụrụ na e dịghị nkwa na nke a mgbe ahụ wụnye a free ngwa bụ maa uche na-adịghị dị ka ọ bụ nke ọ bụla ojiji na niile na dị nnọọ a n'efu nke oge na ohere na nke a ga-eme ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye ọ dịghị ihe ọma si na nrụnye na na e mere.
Ọ bụ ihe kasị mma atụmatụ na ike na-emejuputa atumatu na nke a na ọ na-ana achi achi na onye ọrụ na-akawanye 100% results enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Wondershare Dr. Fone maka Android (Android Data Recovery) bụ ihe ngwọta kasị mma na e na-atụ aro na nke a na-eme ka n'aka na nlaghachie a mere 100%-ekwe nkwa. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịkwara ime ka n'aka na nke kacha mma e mere na ekwentị dị ka a ngwa bụ kọmputa metụtara na Ya mere ọ na-akawanye arụpụta ihe kasị mma n'ihi na onye ọrụ enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge. Na dị nnọọ ole na ole clicks onye ọrụ bụ ike iji weghachite niile data nke android ekwentị gụnyere akụkụ, kọntaktị, ozi ịntanetị na ihe ọ bụla ọzọ stof na a onye ọrụ nwere ike na-eche nke. The akwado ụdị faịlụ nke usoro ihe omume e kwuru dị ka n'okpuru. Ọ na-na--ahụ kwuru na zuru ndepụta nke na-akwado ụdị nwere ike anya na http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-reference.html n'ihi na mma nghọta.
AIF (AIFF), M4A, MP3, WAV, WMA, ufọt ufọt (Midi), OGG, AAC
DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT (PPT / PPTX), PDF, CWK, HTML (HTM), INDD, EPS, PEEJI NKE, AMAOKWU, Ọnụ Ọgụgụ, VSD, ODT, ODP, gbaa, ODG, ODF, RTF, PLIST, ụtụ isi, ute
ZIP, rar, nọdụ, SITX, BZip2, 7z
PST, DBX, EMLX, EML, IGBOB
Olee otú iji Wondershare Dr. Fone maka Android?
Nzọụkwụ na e kwuru n'okpuru na-a ga-agbaso na-eme ka n'aka na data na-natara site android:
1. Site URL http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-guide.html onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ihe omume na-ibudatara na arụnyere. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ekwentị mkpanaaka na-ahụ jikọọ na usoro nke mere na usoro ihe omume na-achọpụta rụọ ya:
2. The USB debugging a na-ahụ na-arụ ọrụ:
3. Ihe omume ga-ahụ nyochaa ekwentị juputara:
4. The Doppler mode na faịlụ ụdị a na-ahụ na-ahọrọ:
5. Ozugbo mgbake e mere onye ọrụ mkpa ijide n'aka na na faịlụ dị ka kwa ọchịchọ na-Ewepụtara na ndị fọdụrụ discarded:
Uru nke Plan B
The atụmatụ bụ 100% kearumaru
The metụtara data mgbake nkwa bụ 100%
Ọ bụ oru oma ma dị irè.
Ụkọ ihe ụfọdụ nke Plan B
Nanị mwepu nke a atụmatụ bụ na ọ bụghị n'efu na onye ọrụ kwesịrị ịkwụ ụgwọ a ụfọdụ ego iji na-enweta usoro.
1. Olee ụdị nke igwe ị na-eji?
2. Ò nwetụla mgbe ị na-ehichapụ ihe dị mkpa na ekwentị gị?
3. Dị ka a ụzọ na-ezere data ọnwụ na ekwentị gị, nke na-eme atụmatụ ị na-ahọrọ?
Ụzọ kasị mma weghachi gị egweri biini
5 Best Software Iji Nyere Gị Aka ndabere Android App Ma App Data
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S5 na Otu Click
Otú nyefee Data si HTC ka Blackberry?
Nkuzi: undelete Videos si gam akporo ntị na mbadamba
Nyefee Music site na kọmputa na-Android-ejighi eriri
> Resource> Android> Android egweri biini - Olee otú iji weghachi ehichapụ faịlụ na Android